Iva wekubiridzira uye Wekuchengetedzeka nyanzvi | Kubva kuLinux
Iva wekubiridzira uye Kuchengeteka nyanzvi
Luigys toro | | GNU / Linux, Yakurudzirwa
Vese vaverengi veLinux vanofanirwa kuve vakajeka nezve zvazvinoreva kuva 'muba', sezvo shamwari yedu ChrisADR haana kuvatsanangurira zvakakwana muchinyorwa Zvinorevei kuti 'hacker' zvinorevei, bongozozo rakakonzerwa nechinyorwa ichi, rakawedzera kunhamba huru yekushanya vanouya kwatiri vachitsvaga ruzivo maererano ne Kubiridzira uye Kuchengeteka, pamwe chete neyakaoma ruzivo rwedu mukudzivirira maseva edu, ane "anosungirwa" kuyedza nenzira dzese kushandisa uye kudzidza zvakawanda nezve ino inonakidza nzvimbo.
Tinofanira kuzvijekesa izvozvo "Haisi chinangwa chedu kuti ruzivo rwekubiridzira uye pentesting rwushandiswe kurwisa chero munhu", kupidiguka, Tinoda kuti vashandisi vedu pamwe nepasi rose vagone kudzidza zvishoma nezvishoma maitiro uye pfungwa dzinovatendera kuti vazvidzivirire pakurwiswa kunokuvadza, kana kukundikana kuti vane masimba ekuita gadzira mitemo yekuchengetedza iyo inovabatsira kubvisa mikana yekurwiswa.
Ini handisi nyanzvi munzvimbo iyi, asi kana ndakashanda kwenguva yakareba mu nzvimbo uko kuchengetedzwa kwemakomputa kunotorwa zvakanyanya, Ndaifanirawo gadzirisa zviga zvekuchengetedza yevatengi vangu, asi pamusoro pezvose padanho repurogiramu ini ndakatarisisa gadzira uye shandisa matekinoro ekuita kuti maapplication angu ave akachengeteka. Nezvose izvi ndinoreva, kuti zvinopesana nezvinofungwa nevanhu, maitiro ekugura, kunyangwe angave akareruka sei kana epamusoro, anogona kuve nemhedzisiro yakanaka pazuva redu zuva nezuva, zvichitibvumidza kuve nemakomputa akachengeteka zvakanyanya nezvirongwa, kudzivirira kazhinji kubva kwedu zvakavanzika zvinotyorwa, pamwe nekuvimbisa kuvimbika kwedata redu.
Mushure mezvose zvataurwa pamusoro, haifanire kunge iri chakavanzika kune chero wedu kuti isu tinofanirwa dzidza nemazvo nezve Kubiridzira uye KuchengetekaNdiri kuzviita, inonakidza, isinganzwisisike nzira, asi pamusoro penzira yese inoratidza kukomba kukuru negwara rakaringana kuti usazopedzisira waita matekiniki asiri iwo akanyanya kukurudzirwa. Ndakatanga nekuverenga zvakapararira, asi ndakakwanisa kutora kosi yandinofunga yakakodzera neiyo Pedzisa Ethical Kubiridzira Kosi, kosi iyi yakandibvumidza kuve neruzivo rwakasimba mumafungiro, maitiro uye zviyero zvinobatwa zuva nezuva munzvimbo idzi, pamusoro pekunditungamira gadzira rangu rebhu randinotarisa kushaya simba uye nekutyisidzira kwandinozoedza kubaya nematekiniki andakadzidziswa mukosi.
Iyo coupon ichave iri kushanda kubva muna Ndira 6, 2018
Iyo coupon yashandura iyo marginal margin zvichibva pane yekutanga mutengo kuwedzera nemusiki wekosi. Zvisinei nemutengo, kosi yakagadziridzwa nezvitsva
Sezvo nedzidzo dzakapfuura, ndakwanisa kuwana koponi kuitira kuti vashandisi veDesdeLinux vawane kosi yakati pamutengo wakakosha mumazuva manomwe anotevera, zvichitevera izvi link achakwanisa zvachose nakidzwa nedzidzo uine dhisikaundi ye 90% 75% . Nenzira imwecheteyo, ndafunga kuita ongororo yakadzama yeiyo kosi kuitira kuti isu tive neruzivo rwezvatiri kuzowana uye nezvangu zvandinoona nezve zvirimo, chimiro, nzira yekudzidza, pakati pevamwe.
1 Nhanganyaya yekubiridzira uye Kuchengeteka.
1.1 Kosi Yehunyanzvi Ruzivo
1.2 Pamusoro pemudzidzisi uye nzira yekudzidza
2 Mhedziso yemunhu
3 Inoenderana Kosi pane Kubiridzira uye Kuchengeteka
Nhanganyaya yekubiridzira uye Kuchengeteka.
Kosi Yehunyanzvi Ruzivo
Iyi kosi ndeye inoumbwa nemavhidhiyo zana nemakumi mana nemana, izvo zvinowedzera kumusoro anopfuura maawa gumi nematanhatu ekutamba, ine yakazara zvinyorwa, zvese muchiSpanish uye yakanangiswa ku yeruzhinji rweese mazinga edzidzo. iyo inopa chitupa chekupedzisa, kupinda mukosi kunobva kuUdemy Platform iyo iwe yaunogona kuwana kubva kune chero browser uye zvakare ine Android uye Ios maapp.
Iyi kosi ndeye 100% dzidziso - inoshanda, iine akawanda mareferenzi, saka mukati mayo iwe unodzidza hunyanzvi asiwo woisa izvo zvawakadzidza mukuita, chikamu chimwe nechimwe chine kuratidzira uye izvo zvinhu zvinozvipedza.
Pamusoro pemudzidzisi uye nzira yekudzidza
Eduardo Arriols Nuñez inotidzidzisa zvakajeka uye chaizvo nezve kubiridzira uye cybersecurity munzira yake Nhanganyaya yekubiridzira uye Kuchengeteka, iine mienzaniso yakaratidzirwa uye nekuratidzira chaiko munzvimbo dzinodzorwa nedzisingadzorwe, mukati mekosi yacho inotipa matipi anobatsira, pamusoro pekuti kosi iyi ine nharaunda inoshingairira zvikuru iyo inogovana ruzivo rwunogoneswa nemudzidzisi.
Iyi kosi yakakamurwa kuita zvikamu zvitanhatu zvinoitirwa zvinotevera
Chikamu 1: Ichi chikamu chakanangidzirwa zvakajeka pakupa chiyero chekosi, kuunza mamwe mazano ekutanga uye pamusoro pezvose kupa matipi mazhinji sezvinobvira izvo zvinokutendera iwe kuti uwane zvakanyanyisa kubva kukosi.
Unit 2: Kuburikidza nemavhidhiyo matanhatu emaminetsi gumi paavhareji, sumo inonakidza kwazvo nezveEthical Kubiridzira uye Kuchengeteka kunopihwa, uko kwatinozodzidziswa pfungwa dzekutanga dzekuchengetedzwa uye kuongorora, kuwedzera pakutipa dzidziso inodiwa kuti tikwanise kuongorora dzakasiyana siyana uye maveketa ekurwisa, zvishandiso kuchengetedzeka uye nzira dzekuchengetedza.
Chikamu 3: Chikamu chechitatu chinotibvumidza kudzidza kugadzira edu emarabhoritari ekuyedza, uko kugona kwekurwisa uye michina iri panjodzi ndiyo ichava nzvimbo yekufarira kwedu, pamusoro pezvo Eduardo anotipa ongororo huru pazvinhu zvikuru zvakagoverwa kuHitical Hacking uye anotinyevera nezve izvo kuti vane imwe mhando yekushupika (yakagadzirirwa kudzidza kukanganisa maitiro nemasevhisi).
Unit 4: Maitiro ekutarisira iyo distro iyo Eduardo inokurudzira kudzidza uye kuwana zvakanakisa kubva kuEthical Kubiridzira ndiKali Linux, saka muchikamu chechina tinodzidziswa zvakadzama kubata kweanoshanda system, maturusi makuru anowanikwa mune ino distro anozivikanwa, isu tiri kupihwa rovedzo yakanaka pakushandiswa kweconsole uye isu tinodzidziswa kugadzira bash zvinyorwa zveiomotation yemabasa.
Unit 5: Chikamu chechishanu chakanangana nekusazivikanwa paInternet, patinonyatso kupihwa sumo uye nhevedzano yemafungiro akakosha ane chekuita nekushandiswa kwekusazivisa netiweki, nenzira imwecheteyo, tinodzidziswa kuisa nekushandisa zvishandiso zvisina kuzivikanwa seTOR , FreeNet, l2P, proxies yekufambisa, VPN masevhisi uye chekupedzisira asi chisiri chidiki isu tinodzidziswa maitiro ekugadzira yedu yekuzivisa mazita.
Chikamu 6: Yekupedzisira yemayuniti inotigadzirira nyika yakaoma uye chaiyo, uko zuva rega rega patinotarisana nematambudziko uye kuti pasina nzira dzakakwana dzekuzvidzivirira dzatinofanirwa kukanganiswa, isu tinodzidza matanho ekumisidzana neSocial Engineering nemaprotocol akakwana ekugovana ruzivo, zvakaenzana Neiyi nzira, isu tichakwanisa kuona nekushandisa huwandu hukuru hwekushupika neakateedzana ehunyanzvi uye maturusi ayo Eduardo achatidzidzisa kushandisa. Chikwata ichi ndicho chikuru pane zvese uye chine makirasi makumi matanhatu nemashanu, uko nenzira yakanyatsodzidziswa unodzidza nzvimbo dzakaomarara zvakanyanya dzine chekuita neKutsika kweKutsika.
Iwo mauniti anopa akasiyana mavhidhiyo uye zvinyorwa zvinowedzesa chimwe nechimwe chekudzidza, nemiyedzo inonyatsoratidza hunyanzvi hwawanikwa, pasina kupokana inzira yakanaka yekutanga munyika ino huru yekubiridzira uye cybersecurity.
Kana iwe uri nyanzvi yekubiridzira uye cybersecurity, mune ino kosi iwe unowana hunyanzvi hwaro unozokwanisa kusimbisa ruzivo rwako, iwe zvakare unozogona kuongorora matekiniki iwe aungave usingazive uye iwe uchave nemukana wekutaurirana nawo vadzidzi vanopfuura mazana manomwe vakasaina chiitiko ichi chikuru.
Imwe yekusimbisa ndeyekuti iyo kosi 'mupenyu'. Izvi zvinoreva kuti mavhidhiyo matsva achaiswa mwedzi wega wega, uye nekudaro, mutengo wedzidzo wevadzidzi vatsva uchawedzera. Kune vese vadzidzi avo vakatowana kosi kare, ivo vanozove nekuwana kusingagumi kune zvese zvitsva zvemukati zvinogadzirwa
Chekupedzisira, sumo yekosi yacho inogona kuonekwa muvhidhiyo yekutanga iri paDademy, ndinotarisira kuti ichakubatsira iwe uye kutora mukana weiyo cupón kuitira kuti vachengetedze mari kana vangangoda kuiwana, nekuti kazhinji mutengo wedzidzo iri $ 120 uye nechidimbu chinenge chiri 10,99 $ 29,99 $.
Inoenderana Kosi pane Kubiridzira uye Kuchengeteka
isu tave kuita kosi inoenderana inonzi Nhanganyaya yekubiridzira uye Kuchengeteka, inoumbwa nemavhidhiyo makumi mashanu nematanhatu, anowanza anopfuura maawa masere ekutamba, aine mapeji anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu eruzivo rwakadzama, ese muchiSpanish uye akananga kune vateereri vezvikamu zvese zvedzidzo. Ine bvunzo nomwe dzakaparadzirwa nematanho uye inopa chitupa chekupedzisa… Isu tanga tawanawo coupon asi isu takatarisira kuigovana munguva pfupi mune imwe chinyorwa, zvekurumidziro uye kukubatsira iwe mukudzidziswa kwako, pano akasiya iyo batanidzo yekoponi yekosi iyi kuita $ 10,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Yakurudzirwa » Iva wekubiridzira uye Kuchengeteka nyanzvi
Juan Martin akadaro
Iyo coupon coupon inoita kunge isiri kushanda. Iyo inotipa isu 75% dhisikaundi uye yaizogara pa29,99 euros ... sevamwe vanhu vese vakawana vasina coupon.
Pindura Juan Martin
Mhoroi, ndine hurombo, ndanyatso kutaurirana nechikwata cheUdemy uye coupon ichange ichishanda kubva mangwana, saka ndine urombo kuti yanga isingawanikwe nhasi ... Parizvino ndichasiya chinyorwa muchinyorwa uye mangwana mangwana ndicha kugadzirisa zvakare kana coupon iri kushanda ..
adrian abadin akadaro
Zvakadaro zvisiri kushanda
Pindura kuna adrian abadin
Isu takavandudza chinyorwa chekutanga pamwe nekugadziridzwa kwakakodzera uye kurudziro, zvinosuwisa nekuda kwezvikonzero zvatisingakwanise kudzora, coupon rinongogona kupa 25% dhisikaundi kuitira kuti itore $ 29,90 ... Nenzira imwecheteyo, isu takanyatsojekesa makomendi uye akawedzera coupon redzidziso yakafanana.
AMigo anokumbira ruregerero, ini ndinobva kuVenezuela uye ndinofarira kosi yacho asi handifanirwe kubhadhara mari iyoyo.
Hector Padró akadaro
Iwe shit, ramba uchivhotera Maduro.
Pindura Héctor Padró
anti tsvuku akadaro
Kune zvatakasara, vapemhi venyika.
Pindura kune anti-tsvuku
Iniwo ndinobva kuVenezuela asi ini handinzwisise kuti mhinduro iri kutsvagei.
Anodiwa Mangwanani akanaka! Ini ndinodzvanya pane iyi link uye quota uye iyo yakaderedzwa dhisikaiti haioneke, ini ndoda kuita kosi iyi.
ANGEL SATO Arevalo akadaro
Ndine kadhi rine huwandu hunofungidzirwa, asi zvinoita sekunge coupon harisi kushanda.
Pindura ANGEL SATO Arévalo
Anodiwa, Une zano here iro iro coupon rinenge richishanda? Ndotenda zvikuru.
Pindura kuna Gertrudis
Iyo coupon coupon haioneke parizvino
Ndatenda kwazvo nechinyorwa !!!!! Ndokumbirawo kuti mutizivise kuti mutepfenyuro unowanikwa riini? Mufaro
Pindura kuna Yoan
Muchinyorwa chinotaura kuti dhisikaundi i90% asi pachokwadi iri 75% .. 🙁
Ini ndanga ndiri mudemy mushandisi kwemakore mashoma uye ivo vanowanzoisa akasiyana madhiri ayo anobva kubva 50% kusvika 90%. Iyo nyaya yekumirira iyo 90% kupihwa kudzoserwa mukati kana iwe usingakwanise kubhadhara iwo chaiwo mutengo kana iyo 75% dhisikaundi.
Ini ndichangotenga kosi yeJava paDademy uye ndiri kufunga nezvekutengawo yehunhu hwekubavha kosi, unoziva here kana izvo zvinopihwa zvinotorwa kakawanda, kana zvikapera musi unotaurwa nepeji kana kana vakawedzera mamwe mazuva mashoma ?
Pindura kuna AlbertoC
Ndoiwanepi coupon racho zvekuti i $ 10.99?
Pindura kuna rarmando
Mhoroi, pane chaunoziva here zvitsva nezve koponi?
Pindura kuna alvar
Jorge Perez akadaro
Iyo kosi inotaridzika kunge inonakidza, asi kodhi haina kushanda kana kuti kwete kosi.
Pindura Jorge Perez
Zvimwe kana iwe ukatipa iyo coupon kodhi taigona kuishandisa… 🙂
Iwe unozotumira iyo coupon kodhi kuti tikwanise kuishandisa?
Iwe unoziva chero chinhu nezve coupon?
Vakomana, ndasimbisa kuti coupon harisi kushanda sezvaraifanira, ndanyora kakati wandei kune munhu anotarisira kutipa kukwidziridzwa kuUademy, asi zvinosuwisa kuti ari pazororo kuCuba nekubatana kushoma ... Panongogadziriswa coupon, ndichatumira imwe nyowani Pushira kuitira kuti munhu wese azive uye ini ndichapindura kune wese wevanofarira kuti vagamuchire ziviso ...
Ndine urombo kuti coupon haisi kushanda nemazvo, uye ndinovimba kuti munogona kubatsirwa nekukwanisa kuwana kosi yakanaka zvakadaro nemutengo unodhura kwazvo.
Ndatenda zvikuru neruzivo rweLagarto. Tinotarisira kuzoti coupon !!!!
Ndatenda, ndinenge ndakatarisa.
Pindura kune skynet29
Asi coupon rinoshanda pamwechete nechipo chazvino kana kuti iro coupon rakasiyana rinokusiya uine 90% dhisikaundi ???
Pindura kuna Jeff
Nep coupon mutengo wedzidzo ungave $ 10.99
ok uye senhamba inofungidzirwa yemazuva, koponi rinobuda riinhi ??? uye Grax
Manheru akanaka, iyo 90% dhisikaundi haisati yaonekwa. Ndiri kufarira kutora kosi yacho. Iwe unogona here kundizivisa ini kana tichigona kuipa iyo? Ini ndichave ndakatarisa, asi kungoitira. Iyo kosi iyo inoonekwa pane iyo udemy peji ine 90% dhisikaundi uye yeinokosha ye10,99, ndeimwe yamaawa makumi maviri nemashanu, muChirungu.
Ndiri kuda coupon kana ndiri kufarira kosi yacho asi handikwanise kutenga mutengo chaiwo weiyi kosi 🙂
Ndiri kumirirawo coupon (:
Hea iniwo ndinopinda mumutsara wekuponi kuti kosi yacho inotaridzika zvakanaka 😉
Ndatenda uye ini ndinotora uno mukana wekukukorokotedza iwe pane iyo blog, izvo zvakanaka kwazvo, kunyangwe ini ndichigomara uye ndisingambonyora mhinduro.
Kwaziso kubva kuBielefeld !!!
Vakomana takazogamuchira mhinduro maererano nekoponi yatainge tapihwa kuitira kuti vese vashandisi ve desdelinux vakwanise kuwana kosi iyi nemari ye $ 10,99, zvinosuwisa kuti koponi iri harizokwanisi kushandiswa kunze kwemadhora makumi matatu panzira iyo kutaura, 30% dhisikaundi, izvi nekuti mushandisi akagadzira kosi akawedzera mwero wake uye chikuva chinongobvumidza iyi huwandu senge shoma (ndinodemba kuti izvi zvakaitika). Udemy vashandi vakaedza kusvika kune mushandisi kuti vabvumirane, asi sezviri pachena havana kupindura nekuda kwekuve pazororo.
Iye zvino tava kuita kosi inoenderana inonzi Nhanganyaya yekubiridzira uye Kuchengeteka, inoumbwa nemavhidhiyo makumi mashanu nematanhatu, anowanza anopfuura maawa masere ekutamba, aine mapeji anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu eruzivo rwakadzama, ese muchiSpanish uye akananga kune vateereri vezvikamu zvese zvedzidzo. Ine bvunzo nomwe dzakaparadzirwa nematanho uye inopa chitupa chekupedzisa… Isu tanga tawanawo coupon asi isu takatarisira kuigovana munguva pfupi mune imwe chinyorwa, zvekurumidziro uye kukubatsira iwe mukudzidziswa kwako, pano akasiya iyo batanidzo yekoponi yekosi iyi kuita $ 10,99.
Nenzira imwechete iyi kosi ndeye yakasarudzika, kubvira Paco sepulveda inotidzidzisa zvakajeka uye chaizvo nezve kubiridzira uye cybersecurity, ine mienzaniso yakaratidzirwa uye kuratidzira chaiko munzvimbo dzinodzorwa uye dzisingadzorwe.
Ndatenda zvikuru neruzivo!
zaf rwizi akadaro
Unoziva here kuti coupon rekuburitsa richiri kushanda? '
Pindura kuna zaf rwizi
Kusarudza yako yekutanga chirongwa mutauro